“Zanaka Namakia Mihonjo” : Ezahina hatao isan-taona
lundi, 25 décembre 2017 13:21
Notanterahina tao Namakia ny 20 sy 21 desambra teo ny “Zanaka Namakia Mihonjo”, hetsika karakarain’ny zanaka ampielezan’i Namakia. Nisy ny Lomay bevata na hazakazaka lehibe sy lalao baolina kitra ary fanofanana momba ny fambolena sy fiompiana izay nokarakarain'izy ireo.
Ireo vato nasondrotry ny tany no tompon-kevitra tamin'izany ka tamin'ity taona ity ny andiany faharoa amin’ny “Zanaka Namakia Mihonjo”, raha tamin'ny taona lasa ny andiany voalohany. Faly ny mponina tao Namakia satria nahita ireo zanany izay mila ravinahitra mielimpatrana erak’izao tontolo izao mahay miray hina sy mifankatia ary mifanohana ny amin'ny fitodiana sy fijerena ny tanana nahabe, ka nisy ny loka azon'ireo mpandray anjara mendrika rehetra.
Ezahana hatao isan-taona izao hetsika izao, hoy ny mpikarakara, satria betsaka ireo zanaky ny faritra no sangany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenana raha ny hazakazaka na lalao baolina kitra, ary efa solontenan’i Madagasikara.
Nanomboka ny 20 desambra ny fiofanana momba ny fambolena sy fiompiana ka naharitra roa andro izany. Notanterahina ny harivan’io 20 desambra ny lomay b evata ary ny 21 desambra ny lalao baolina kitra ka nifandona teo amin'ny sokajy vehivavy Namakia sy Vehivavy Belalanda, teo amin’ny sokajy lehilahy kosa ny Mpilalao voafantin’i Namakia sy ekipan’ireo mitady ravinahitra any ivelany.